Dhismaha Shell-ka adag ee lacag la'aanta ah
Gashaan gaashaan la'aan
Gaashaan la hagaajin karo oo laga saari karo
Nidaamka qumman ee toosan
Naqshadeynta astaanta Lowe
CE EN1077 la caddeeyay
Loo heli karo barafka, kabaha taraafikada iyo koofiyadda safarka.
Lambarka Moodalka Koofiyad baraf ah-V01S
Teknolojiyada Qolof adag + PC in-caaryada
Muuqaalka Qolof adag oo saameyn sare leh, ku habboon raaxada madaxa, qaab-dhismeed hooseeya
Kordhi fursadaha Gaashaan cad oo la saari karo, gaashaan aan ceeryaamo lahayn
Xarig Polyester khafiif ah
Faashad mesh qabow
Koofiyad-hooseeya, koofiyad-dhiirrigelin leh ayaa horseed u noqotay qaybtayada qolofka cirbadeynta waxayna ku soo laabatay inay siiso saaxiibbo xur ah xulasho la yaab leh oo lagu riixayo horumarkooda meel kasta oo buurta ka mid ah baarkinka illaa tubbada. Dhisida qolofka duritaanka macnaheedu waxa weeye koofiyadda ujeeddo loo dhisay si looga hortago saamaynta dhow ee jiibitaanka, boodka, socodka iyo safarka; tani waxay ugu wacan tahay saameynta-nuugista shaashadda EPS iyo ku-habboonaanta. natiijadu waa isku dheelitirnaan dhammaystiran oo raaxo leh, adkeysi iyo naqshad goos goos ah oo buuxineysa baahiyaha maanta wadayaasha xorriyadda badan leh ee awoodda u leh maareynta saameynta tamarta sare iyo mid hoose labadaba. Tikniyoolajiyad casri ah oo casri ah, koofiyad baraf ah waxay bixisaa nadiif, muuqaal muuqda iyo suuf aad u qabow oo quruxsan iyo nidaam ku habboon iyo sidoo kale suufka dhegaha laga saari karo.
Qolofka adag ee saameynta sare leh wuxuu koofiyadda ka ilaaliyaa shilalka ama dhagaxa, iyadoo la adeegsanayo injineerka ABS qalab balaastig ah oo ku jira guryaha aad u deggan, waxaan had iyo jeer ku ilaalinaa badbaadada koofiyad tayo sare leh hadafkeena. Qalabka EPS ee habka wax-ku-dhiska ee horumarsan wuxuu bixiyaa miisaan fudud laakiin aad u xoog badan ilaalinta madaxa. Si loo helo isku dheelitirnaan buuxda oo udhaxeysa EPS iyo qolof adag, waxaan ugu talagalnay kanaallada joomatari ee bannaanka EPS liner, taas oo ka dhigaysa koofiyad wanaagsan isku soo uruurinta wax soo saarka iyo tayada joogtada ah, kanaallada dibedda waxay ka caawiyaan socodka hawada iyo awoodda qaboojinta howlaha banaanka.
Koofiyadda barafku waxay ku qalabeysan tahay suuf dhagta-dhamaadka sare leh, suufka dhegaha gudaha ee naylka ayaa siiya taabasho aad u fiican oo ka soo horjeeda maqaarka isla markaana diiriya wejigaaga xaaladda qabow, waxaan sidoo kale u qaabeynay guddi dibedda ah ee suunka dhegta oo lagu dhajiyay tolmo tayo sare leh. teknolojiyada, waxaan sidoo kale bixinay ikhtiyaarro loo habeeyay suufka dhegaha oo leh qalab kala duwan (sida, maqaar, shiraac wax iyo walxaha suede ah) iyo joomatari gacmeedyada bannaanka (sida iskuxirka darbiyada badan, kuleylka kuleylka leh lakabka TPU) oo sameeya muuqaal aad u wanaagsan oo kaa farxinaya barafka.
Daboolka ballaadhan ee fidinta iyo adeeg bixiyaha suufka ku habboon wuxuu siiyaa dareen raaxo leh iyo ilaalinta madaxa gebi ahaanba. Waxaan sidoo kale diyaarinay nidaam qumman oo toosan oo macaamilku ku habeyn karo taakuleynta hal gacan oo dijitaal ah, hagaajiyaha ayaa bixinaya seddexda boos ee tooska ah ee macaamilku uu dooran karo habka ugu habboon ee habka ugu habboon ee ku habboon, taas oo adiga kugu habboon.
Hore: Ski Freestyle Ski & koofiyad baraf ah V10ski
Xiga: Koofiyad Ski iyo Carruurta V01Kid
Koofiyadda Barafka ee Bluetooth
Koofiyad Sawir-barafeed hooseeya
Koofiyadaha Kabaha Koofiyadaha